Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): April 2012
By NAW NOREEN | April 24, 2012 | DVB
The PaO National Liberation Organisation is set to hold another round of talks with top government negotiator Railway minister Aung Min in mid-May.
Khun Myint Htun, general secretary of the PNLO, said the group had reached an agreement with the minister duringaphone conversation on Sunday and the two sides would meet next month.
Secretary Clinton Delivers Remarks at the Screening of "The Lady"
ရန်ကုန်မှာ ပအိုဝ်းအမျိုးသားတစ်ယောက် စစ်သားရိုက်လို့ ဆေးရုံတက်ရ
နောင်ခမ်းခါ | ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရန်ကုန်မြို့မှာ လာရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်တဲ့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်က မြန်မာစစ်သားမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်မှုကြောင့် သွားနှစ်ချောင်းကြိုးပြီး ဦးခေါင်းမှာဒဏ်ရာရလို့ ဆေးရုံတက်ပြီး ရှစ်ချက် ချုပ်ရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
A British doctor says, "Medicine in my country is so advanced that we can takeakidney out of one man, put it in another man, and have him looking for work in six weeks."
BBC |7April 2012
Karen rebels fighting the government in Burma have confirmed to the BBC that their leaders have met Burma's President Thein Sein.
ကလောမဲဆန္ဒနယ် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီ ရှုံးနှိမ့်
တောင်ကြီးတိုင်းမ် | ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခွန်သန်းမောင်က ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှ ဒေါက်တာ ဒေါ်သန်းငွေကို ရှုံးနှိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။